Otu esi echekwa akụkọ sitere na ndị ọzọ na Instagram | Nzukọ mkpanaaka
Otu esi echekwa akụkọ sitere na ndị ọzọ na Instagram
Daniel Terrasa | 12/05/2022 21:30 | Instagram, Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet
Akụkọ Instagram bụ otu n'ime ihe mere netwọkụ mmekọrịta a na-ewu ewu nke ukwuu. Ihe karịrị nde mmadụ 500 na-arụsi ọrụ ike kwa ụbọchị gburugburu ụwa bụ ihe akaebe. Ụzọ a nke ịkekọrịta ọdịnaya pụtara ìhè karịa ihe niile maka ọdịdị ihu ya. Akụkọ nwere ndụ dị mkpụmkpụ ma n'ọtụtụ ọnọdụ anyị ga-amasị anyị inwe ike idowe ha ruo mgbe ebighị ebi. Nke anyị na nke ndị ọzọ. Yabụ na post a anyị ga-ahụ Otu esi echekwa akụkọ n'aka ndị ọzọ na instagram.
Ọ ga-ekwe omume ịkọrọ ndị ọzọ akụkọ nke anyị. Ma na ndị na-eso ụzọ anyị niile ma ọ bụ naanị ole na ole, ndị a họọrọ site na nhọrọ ezigbo enyi. Ha nwekwara ike ịbụ cKekọrịta na Facebook (Ebe ọ bụ na Instagram bụ nke netwọkụ mmekọrịta a) yana, nke kachasị, debe akụkọ mgbe ụfọdụ nke ndị enyi anyị.
Ọdịnaya emetụtara: Otu esi ahụ ihe nhụchalụ nke akụkọ Instagram
Ee, akụkọ nwere ike ịbụ ka ibudata. Anyị nwere ike ichekwa ha na ngwaọrụ anyị ka anyị nwee ike ịnụ ụtọ ha mgbe ọ bụla anyị chọrọ ma debe ha ruo mgbe ebighị ebi. Zọpụta ha site n'ọnọdụ mbụ ha, nke na-abụghị nke ọzọ ma ọ bụghị na-apụ n'anya. Iji budata akụkọ Instagram ndị ahụ n'aka ndị ọzọ, na ekwentị anyị ma ọ bụ na kọmpụta, na ekwentị anyị, enwere weebụsaịtị emepụtara maka ebumnuche a, yana ọtụtụ ngwa na Google Play. Anyị na-akọwa ya nke ọma n'okpuru:
1 Budata akụkọ sitere na ndị ọzọ na gam akporo
1.1 Akụkọ Saver
1.2 Budata vidiyo Instagram
2 Budata akụkọ sitere na ndị ọzọ na iOS
2.1 ReShare Akụkọ maka Instagram
2.2 Akụkọ gbadata
Budata akụkọ sitere na ndị ọzọ na gam akporo
Enwere ọtụtụ ngwa ndị ọzọ anyị nwere ike ịtụgharị iji chekwaa akụkọ ndị ọzọ na Instagram site na iji ekwentị gam akporo. Abụọ n'ime ndị kacha mma bụ Akụkọ Saver y Budata vidiyo Instagram (Aha ahụ kwuru ya niile). Ka anyị hụ ka nke ọ bụla n'ime ha si arụ ọrụ:
Otu esi echekwa akụkọ sitere na ndị ọzọ na Instagram site na iji Akụkọ Saver
Iji jiri ngwa a bara uru anyị ga-agbaso usoro ndị a:
Primero anyị na-emeghe ngwa (mgbe ibudatara ma tinye ya na ekwentị anyị, n'ezie) anyị na-abanye na akaụntụ Instagram anyị.
Site na isi peeji nke Akụkọ Saver anyị nwere ike ịchọgharị akụkọ nke ndị na-eso ụzọ anyị.
Anyị na-ahọrọ akụkọ anyị chọrọ ibudata site na ịpị bọtịnụ «Debe ".
A ga-edowe faịlụ niile ebudatara n'ime folda nwere aha ngwa a ga-emepụta n'ime gallery nke ekwentị anyị.
(*) Maka nzuzo ka ukwuu, ọ ka mma ịhọrọ aha njirimara ọhụrụ.
Budata njikọ: Akụkọ Saver.
Otu esi echekwa akụkọ ndị ọzọ na Instagram na "Budata vidiyo Instagram"
Nke a bụ ngwa ọzọ magburu onwe ya iji budata akụkọ ndị ọzọ na mkpanaka Android anyị. Mgbe nbudata ya, ọ ga-apụta na ekwentị anyị na aha nke IG Downloader. Iji jiri ya, soro usoro ndị a:
Nke mbụ, anyị ga-abanye na Instagram wee pịa ya akara ngosi ato dị n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ.
Anyị họrọ nhọrọ nke "Detuo njikọ".
Ọzọ, anyị na-emeghe ngwa IG Downloader wee pịa "Tapawa njikọ".
Wee pịa "Download".
N'ikpeazụ, n'ihi na chekwaa akụkọ ihe mere eme na ekwentị, ị ga-enweta akụkọ ihe mere eme nke ebudatara akụkọ site na akara ngosi dị n'akụkụ aka nri elu.
Budata njikọ: Budata vidiyo Instagram.
Budata akụkọ sitere na ndị ọzọ na iOS
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa akụkọ sitere na ndị ọzọ na Instagram ma ị nwere iPhone, anyị nwekwara atụmatụ abụọ maka gị: ReShare Akụkọ maka Instagram y Akụkọ gbadata. Nke a bụ otú ha si arụ ọrụ:
ReShare Akụkọ maka Instagram
Otu esi echekwa akụkọ sitere na ndị ọzọ na Instagram na ReShare Akụkọ
Nke a bụ ngwa dị mfe iji. Otu n'ime njirimara ya na-atọ ụtọ bụ na ọ na-enye anyị ohere ịlele Akụkọ Instagram n'amaghị ama. Iji jiri ya, ị ga-eme ihe ndị a:
Iji malite, anyị na-emeghe ngwa budata na App Store ma tinye ya na ekwentị anyị.
Mgbe ahụ, anyị na-achọ aha njirimara nke bugoro akuko anyi choro budata.
Họrọ akụkọ ahụ wee pịa «Budata".
Iji mechaa, pịa bọtịnụ «Chekwa", nke a ga-echekwa akụkọ ahụ na gallery nke ngwaọrụ anyị.
Budata njikọ: ReShare Akụkọ maka Instagram
Otu esi echekwa akụkọ sitere n'aka ndị ọzọ na Instagram na AkụkọDown
Uzo ozo di nma Akụkọ gbadata, webụsaịtị efu (n'agbanyeghị na mgbasa ozi juru ya). Ọ dịghị mkpa ibudata ihe ọ bụla na smartphone anyị. Ọzọkwa, saịtị a zuru oke ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ibudata ụdị ọdịnaya na kọmputa, ma ọ bụ Mac ma ọ bụ Windows PC. Ụzọ ojiji dị nnọọ mfe:
Anyị na-abanye na webụsaịtị Akụkọ gbadata ma tinye aha njirimara na mpaghara ọchụchọ. Mgbe ahụ, anyị pịa bọtịnụ Chọọ.
Akụkọ niile nke onye ọrụ a na-ajụ ajụjụ na-ebipụta n'oge ahụ ga-apụta na ihuenyo, nyere iwu site na nso nso a ruo na nke ochie. Enwere bọtịnụ «Budata» n'okpuru nke ọ bụla n'ime ha. Ọ bụ nke anyị ga-pịa iji malite nbudata.
N'ikpeazụ, na Safari nbudata mmanya, a-acha anụnụ anụnụ okirikiri ga-egosi na e dechara nbudata. Anyị ga-ahụ akụkọ ndị echekwabara nke ọma "Nbudata", ịkọrọ ha ma ọ bụ zọpụta ha na iPhone gallery.
Njikọ: Akụkọ gbadata
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Otu esi echekwa akụkọ sitere na ndị ọzọ na Instagram
Ntuziaka mmeghachi omume elemental na mmetụta Genshin